Tricks yekudzivirira hwema hwakaipa mumakabati | Bezzia
Tricks yekudzivirira hwema hwakaipa mumakabati
Kuti udzivise hwema hwakaipa mumakabati iwe unogona kushandisa mashoma anoshanda uye anochengetedza mishonga yekumba. Chinhu chakakosha kwazvo kuchengeta mundangariro kubvira unyoro, hutachiona hunoungana mumakabati nezvimwe zvikonzero zvinokonzeresa hwema hwakaipa. Uye hapana chinhu chakaipisisa kupfuura kuve nehembe dzakachena muwadhiropu uye nekukurumidza uchitora munhuwi usingafadzi.
Kana izvi zvikaitika uye hwema husingafadzi hukaonekwa mumawadhiropu, hapana imwe sarudzo kunze kwekuwacha zvekare mbatya dzese nekuchenesa wadhiropu. Chimwe chinhu icho pasina mubvunzo chinokutorera iwe yakawanda nguva uye kushanda izvo Unogona kuzvidzivirira kana ukatora matanho ekuzvidzivirira senge atinokusiira pazasi. Cherekedza aya matipi uye zvipfeko mumakamuri ako zvichagara zvine hwema hunoshamisa.
1 Hwema husina kunaka mumakabati Ungadzivisa sei?
1.1 Homemade zvidobi zvekudzivirira hwema hwakaipa
Hwema husina kunaka mumakabati Ungadzivisa sei?
Makabati ari nzvimbo yakakwana yezvipembenene zvakadai semapfunde kuwedzera zvakasununguka. Vane hunyoro, rima, uye matukisi kwavanogona kuwana chikafu. Kuti udzivise hwema hwakaipa, zvakare moths izvo zvinoparadza mbatya, zvakakosha kwazvo kuti utarise zvimwe zvakadzama.
Ita shuwa yekugara uchichengeta hembe zvakanaka kuoma: Kana iwe ukachengeta hembe ine hunyoro hushoma, iwe ucharasika uye iyo yakazara kabhodhi inozadza nehunyoro. Usati wachengeta mbatya, ita shuwa kuti dzaoma, kana zvichibvira panze.
Geza kabhodhi nguva dzose: Yese shanduko yemwaka inotora mukana kuburitsa kabhedhuru zvachose uye nekuchenesa kwakadzika. Bvisa makona ese zvakanaka uye yakachena nemusanganiswa wemvura nevhiniga chena kuchenesa.
Isa mabhegi emupunga mumakabati: Rice yakakwana kudzivirira humhutu uye fungi dzinoonekwa nekuda kwechikonzero ichi. Unofanira chete isa chitsama chemupunga wezviyo muhomwe yemachira, vhara zvakanaka uye woisa mumakona ewadhiropu.
Kunze kwekuchenesa kabati, zvakakosha kuti iwe uve nechokwadi chekuchengetedza mbatya chete kana dzakachena chaizvo. Nekushandisa kamwe chete, kunyangwe isina mavara, zvipfeko zvinounganidza zvisaririra zvevhu, ziya, masero akafa anouya kubva paganda uye kunyangwe chikafu chinosara. Aya mavara ndiwo chikonzero chekuonekwa kwezvipembenene, fungi uye zvinonhuwira zvakashata mumakabati.
Homemade zvidobi zvekudzivirira hwema hwakaipa
Kana tangova newodhiropu yakachena uye isina disinfected uye mbatya dzakachena zvakakwana uye dzakaoma, inguva yekuisa mukuita dzimwe nzira dzekuzvigadzirira kuti uwane hwema hunonaka mukati mewadhiropu. Cherekedza hunyengeri uhu uye unakirwe nembatya dzako dzinonhuwirira uye dzisina hwema hwakaipa mumawadhiropu.
Anonhuwirira machira masaga: Unogona kuzviita iwe pamba nekunhuwirira kwako kwaunofarira. Iwe unongofanirwa kutora bhegi rejira, zadza neakaomeswa maruva potpourri uye madonhwe mashoma eunofarira hwema. Isa bhegi rimwe kana maviri muwadhiropu imwe neimwe, zvichienderana nesaizi uye hembe dzaunochengeteramo.
Kofi yepasi: Yakakwana yekudzivirira muforoma uye inonaka sehwehwe hwejira. Unogona kumwaya pasi kofi pamusoro pekabati, siya kuti uite kwemazuva maviri akazara uye wozoshuva. Kuti mbatya dzako dziite kunhuhwirira sekofi nyowani, unogona kuisa kofi yepasi mumabhegi emachira uye chengeta pakati pembatya dziri mumadhirowa.
elavender: Kana paine hwema hwakanyanya kupfeka kumachira emumba semashizha, machira, uye matauro, iri lavender. Izvo zvakakwana kurwisa hwema hwakasimba senge chakuvhuvhu, chakakwana kuve mune makabati. Unogona kushandisa lavender mumabhegi ejira kana isai maruva mashoma zvakananga pakati pemubhedhaKunyangwe zvichikurudzirwa kushandisa machiputoni edonje kudzivirira maruva kubva mukutsvukisa hembe.
Mawadhiropu pamba ane chikamu chakakosha kwazvo senge mbatya, zvipfeko zvinosarudzwa neumwe neumwe zvine hungwaru uye mune mari yakanaka inoiswa mukati. Usarega hembe dzichikuvara kana kuwana hwema hwakaipa kune mamwe maratidziro. Nematanho aya akapusa unogona kuve nemakabati ako anogara akachena uye achinhuwirira zvakanaka, pamwe nehembe yakakwana yekupfeka chero nguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Tricks yekudzivirira hwema hwakaipa mumakabati
Sei mavara machena achionekwa pameno angu?